‘सिजी सबल केन्द्र : हातखुट्टा गुमाएका ६ सयलाई नयाँ जीवन’ – Health Post Nepal
२०७९ वैशाख २७ गते २१:२६
काठमाडौं- नुरनारायण चौधरी ४५ वर्ष पुगे। १८ वर्षअघि सडक दुर्घटनामा परेर एउटा खुट्टा गुमाउँदा २७ का लक्का जवान थिए। केही गरौं भन्ने उमेरमा खुट्टा गुमाउनुपरेपछि उनलाई लाग्यो- अब जीवनको अर्थ नै सकियो। दाहिने खुट्टा गुमाएका उनलाई सामान्य कामका लागि समेत अरुको सहयोग चाहिन थाल्यो। उडौं उडौं लाग्ने त्यो उमेरमा उनी हिँडडुल समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे।
‘एउटा खुट्टाको भरमा जेनतेन घर बाहिर निस्कियो भने घरभित्र कसरी पस्ने भन्ने चिन्तामै दिन बित्थे,’ उनी कहालीलाग्दो दुई दशक सम्झिन्छन्, ‘तिर्खा लाग्दा पानी सारेर खान नसक्ने अवस्था थियो। शौचालय जान कसले सहयोग गरिदेला भनेर कुर्नुपर्थ्याे। खुट्टा नहुँदा भोग्नुपरेका दिन भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ, म आफैं आफ्नो अवस्था बयान गर्न सक्दिनँ।’
गत साता नवलपुर मध्यविन्दु नगरपालिकाका नुरनारायणलाई भेट्दा उनको मुहारमा नयाँ चमक थियो। उनी नयाँ जीवन पाएको खुसीमा रमाएका थिए।
‘मैले जीवनमा आफ्नै खुट्टाले फेरि हिँड्न पाउँला भन्ने आसा मारिसकेको थिएँ। तर, त्यो शौभाग्य अहिले पाएको छु,’ नुरनारायणले कृत्रिम खुट्टाको सहारामा हिँडेर देखाउँदै भने, ‘अहिले ती पुराना दिनको पीडा सकिएका छन्। आफैं हिँड्न सक्ने भएको छु। अब मलाई शौचालय कसले पुर्‍याइदेला भनेर कुरेर बस्नुपर्दैन। तिर्खा लाग्दा कसले पानी ल्याइदेला भनेर बाटो हेर्नुपर्दैन।’
१८ वर्षसम्म एउटा खुट्टाको भरमा बाँच्नुपर्दा उनले के सम्म भोगेनन्? सहयोग गर्न गाह्रो मान्ने तर दया गर्न अग्रसर हुने समाजको व्यवहार, तिरस्कार र अपमानको जिन्दगी। छोरोले कमाई गर्ला र परिवारलाई सहयोग पुर्‍याउला भन्ने परिवारको आशमाथि परेको बज्रपात। र, आफैं केही गर्न नसक्दा बारम्बार दिमागमा घुमेका निराशाका पलहरू।
‘के अब तपाईं तन्दुरुस्त हुनुभयो?,’ प्रश्न झर्न नपाउँदै फिस्स हाँसेर नुरनारायण भन्छन्, ‘पहिला जस्तै तन्दुरुस्त त होइन तर अब अरुको सहारामा बाँच्नुपर्ने दिन भने सकिए कि भन्ने लागेको छ। नयाँ जीवन पाएको महसुस गर्दैछु। कम्तिमा आफैं हिँड्न सक्छु। परिवारको बोझ घटाएको छु। सानोतिनो काम गरेर आफ्नो जीवन चलाउने हिम्मत पलाएको छ।’
नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिकामा स्थापना भएको सिजी सबल केन्द्र नुरनारायणजस्ता सयौंको जीवनमा बरदान बनेको छ। नवलपुरमा औद्योगिक पार्क स्थापना गरेका उद्यमी तथा समाजसेवी विनोद चौधरीले आफ्नो कर्मभूमिका लागि योगदान गर्न सुरु गरेको समाजसेवा नुरनारायणजस्ता हातखुट्टा गुमाएका सयौंका लागि आसाको दियो बनेर बलिरहेको छ।
भरतपुर महानगरपालिका-११ की २५ वर्षीया रचना थापाले सात वर्षअघि दुर्घटनामा खुट्टा गुमाइन्। युवा उमेरका हजार सपना खुट्टासँगै काटिए र चार दिवारभित्र कैद भए। जीवनमा के–के गरौंला भनेर सजाइएका योजना भत्किए। अनि, अब कसरी घर भित्रबाहिर गर्ने होला? शौचालय कसरी जाने होला? खेल्दै डिलसम्म पुगेका साना भाइबहिनी लड्नै लाग्दा समेत टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने नियति।
रचनालाई ती दिन सम्झिँदा पनि निकै नरमाइलो लाग्छ। ‘कम्ता गाह्रो हुन्थ्यो पहिला, आफ्नै घरमा पनि बेसहारा झैं हुनुपर्थ्याे,’ उनी भन्छिन्।
गएको वर्ष उनका लागि आसाको दियो बनेर एउटा खबर कानसम्म आइपुग्यो- नजिकै नवलपुरमा कृत्रिम खुट्टा जडान गर्ने सुविधा आइपुगेको छ। यो खबर पुष्टि गरेपछि उनी परिवारको सहायतामा सिजी सबल केन्द्र पुगिन्। चिकित्कसले उनको खुट्टा परीक्षण गरे। र, उनका लागि कृत्रिम खुट्टा बनाउने काम सुरु भयो।
सबल केन्द्र पुगेपछिका एकाध घन्टामै उनको जीवनमा खुसीका पलहरू आइसकेका थिए। कृत्रिम खुट्टा जडान गरेपछि प्राविधिकले उनलाई भने, ‘अब तिमी हिँड्न सक्छौं। लौ हिँडेर देखाउ त।’
उनका लागि त्यो पल सपनाजस्तै थियो। उनी बिस्तारै उठिन् र हिँड्न थालिन्। सात वर्षपछि फेरि उनका दुईवटा खुट्टा चले। उनी हिँड्न सक्ने भइन्। उनलाई लाग्यो- हिँडेरै भरतपुर पुगौं। सात वर्षसम्म उभिन नपाएको जुन पीडा उनको मनभित्र भरिएको थियो।
‘शौचालय जान पनि अरुको सहारा चाहिने ती दिन अहिले इतिहास बनेका छन्। अरुकै भरमा बाँच्नुपर्ने दिन अन्त्य भएको छ। र, अहिले नयाँ बिहानी आएजस्तो भएको छ,’ रचनाले फेरिएको जीवनशैलीबारे भनिन्।
गत वर्ष फागुनमा उनले सिजी सबल केन्द्रमा कृत्रिम खुट्टा जडान गरेकी थिइन्।
‘जब समस्यामा परेका मानिसका जीवनमा परिवर्तन आउँछ र उनीहरूको मुहारमा खुसी छचल्किन्छ मेरो समाजसेवाको अर्थ पूरा हुन्छ,’ चौधरी फाउन्डेसनका अध्यक्षसमेत रहेका उद्यमी विनोद चौधरी भन्छन्, ‘मैले समाजसेवामा गरेको योगदान आममानिसको जीवनमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको हुनुपर्छ। सिजी सबल केन्द्रमार्फत हामीले गर्न सकेको काम यसैका लागि हो किनभने यसले मानिसको जीवनमा तात्विक फरक पार्दछ। एकजना परनिर्भर मानिस आत्मनिर्भताको बाटोमा अगाडि बढ्छ।’
नेपाली कांगे्रसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका चौधरीले नवलपुरमा स्थापना गरेको सिजी सबल केन्द्रबाट हालसम्म ६ सयजनाले कृत्रिम हातखुट्टाको सुविधा लिएका छन्। नेता चौधरीले हातखुट्टा गुमाएर समस्यामा परेका आमनेपालीलाई कृत्रिम हातखुट्टा वितरण गर्न नवलपुरमा सिजी सबल केन्द्र स्थापना गरेका हुन्। यसबाट नवलपुरवासीलगायत देशभरिका नागरिक लाभान्वित भएका छन्।
चौधरी व्यवसाय सँगसँगै समाजिक काम पनि उही गतिमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको बताउँछन्। ‘विभिन्न कारण हातखुट्टा गुमाउन बाध्य नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको जीवनमा अलिकति भए पनि सहजता ल्याउन सबल केन्द्रमार्फत मेरो प्रयत्न जारी छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘हातखुट्टा पाएपछि उहाँहरूको जीवनमा आउने सहजता वास्तवमै अतुल्य रहन्छ।’
उद्यमी चौधरीले आफ्नो कर्मभूमि नवलपुरमा सबल केन्द्र स्थापना गरिनु स्थानीय जनसमुदायप्रतिको सम्मान रहेको बताए।
यसअघि गैंडाकोट र काठमाडौंमा शिविर आयोजना गरी कृत्रिम हातखुट्टा वितरण गरिएको थियो। यस्तो शिविर आयोजना हुँदा ५ सयभन्दा बढीले आवश्यकताअनुसार कृत्रिम हातखुट्टा निःशुल्क प्राप्त गरेका थिए।
हाल नवलपुरको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा सिजी सबल केन्द्रले नियमित कृत्रिम हातखुट्टा जडानको सुविधा दिइरहेको केन्द्रका फोकल पर्सन दीपक सिंह केसीले बताए।
उनका अनुसार भारत राजस्थानबाट आएका कृत्रिम हातखुट्टा सम्बन्धी दुई विज्ञको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा यो सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
धनुषा कमला नगरपालिका-९ का उमेशचन्द्र शाहको अनुभव पनि नुरनारायणकै जस्तो छ। १० वर्षअघि सवारी दुर्घटनामा दाहिने हात गुमाएका उनले पनि सिजी सबल केन्द्रबाट नै कृत्रिम हातको सुविधा लिएका थिए।
‘हातकै कारण मलाई पहिला घरबाट बाहिर निस्कन पनि निकै अप्ठेरो लाग्थ्यो,’ उमेशचन्द्र भन्छन्, ‘अहिले बाहिर निस्कन कन्फिडेन्ट आएको छ।’ उनले सर्टको टाँक पनि अरुले लगाइदिने अवस्थाबाट अहिले मुक्त भएको बताए।
नवलपुर मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालस्थित सिजी सबल केन्द्रबाट पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै ६५ जनाले कृत्रिम हातखुट्टा जडान सुविधा पाएका छन्। नवलपुर र आसपासका जिल्लामात्र होइन, दाङ रोल्पालगायत जिल्लाबाट पनि उक्त सुविधा लिनेहरू छन्।
रोल्पाका ५३ वर्षे मने पुन मगरले पनि गत साता कृत्रिम खुट्टा लिएपछि आफ्नो पीडाको घाउमा मलहम लगाएको झैं भएको अनुभव सुनाए।
क्यान्सरका कारण उनको देब्रे खुट्टा काट्नुपरेको थियो। ‘शरीरमा महत्वपूर्ण अंग नै नहुँदाको पीडा कसरी भनौं,’ उनले भने, ‘अहिले सहज महसुस गरेको छु।’ उनले कृत्रिम खुट्टाको सहायताले हिँड्न थालेकोे बताए।